Ufiphalisa njani kwi-Procreate: Iindlela ezahlukeneyo zokuFiphalisa kwi-Procreate | Abadali be-Intanethi
Ufiphalisa njani kwi-Procreate
UNerea Morcillo | 09/05/2022 17:00 | ngokubanzi, Tutorials
Iinkqubo zokuhlela okanye ukuyila zayilwa, kwaye akuzange kuthethwe ngcono, ukuququzelela ukudalwa kweeprojekthi ezinomdla, kwaye ngaloo ndlela kufumaneke iziphumo ezilungileyo. Iinkqubo zazo zonke iintlobo zenziwe, ukuhlela imifanekiso, ukudala imifanekiso, njl.
Kule post Sifuna ukuthetha nawe malunga nesixhobo esiphumelele zonke ezi parameters, kwaye ngokungathandabuzekiyo i-Procreate. Ukongeza, siza kukwazisa kwaye sikuntywilisele kwisifundo esilula apho uya kufunda indlela yokufiphalisa le nkqubo.
Isifundo silula kakhulu, kodwa ukuba awukayazi ukuba le nkqubo imalunga nantoni, okanye yintoni eyona misebenzi yayo, siza kukubonisa iinkcukacha ezithe vetshe ngezantsi.
1 Ukuvelisa: imisebenzi ephambili
2 IsiFundo: Fiphaza kwi-Procreate
2.1 Indlela yoku-1: ukufiphala ngombala
2.2 Indlela yesi-2: Ukusebenzisa ubuchule bomculi
2.3 Indlela yesi-3: Fiphaza ngesicimi
2.4 Indlela yesi-4: Mfiphali ngeGaussian Blur
3 Ezinye iindlela zokuvelisa
3.2 I-Autodek SketchBook
Ukuvelisa: imisebenzi ephambili
Ukuchaza ukuba yintoni le nkqubo, kufuneka sibuyele ku-2011, xa i-Apple yagqiba ekubeni iyikhuthaze ngevenkile yayo ye-apula. Kamva, yaveliswa kwaye yaphuhliswa yi-Savage Interactive, inkampani esekelwe e-Australia ezinikele kwiprogram kunye nokudala izixhobo ezifanayo.
Isixhobo esisebenzisa sona amagcisa amaninzi kunye nabayili baye bafumana iziphumo ezigqwesileyo kwiiprojekthi zabo, kuba uphawu lwayo oluphambili kukuba inethuba lokuyila kunye nokudala imizobo. Ifana kakhulu neenkqubo ze-Adobe ezifana ne-Illustrator okanye i-Photoshop, ngoko ke ukuba sele usebenzisa olu hlobo lomthombo, uya kuba sele unesiseko sangaphambili esisekiweyo.
Njengazo zonke iinkqubo, Ukuvelisa iye yavela ngokuhamba kweminyaka, uguqulelo emva kwenguqulelo, inkalo eye yathetha lukhulu kwezinye zohlaziyo lwayo.
Ineseti yokuqalisa ye iibrashi kunye nokwenziwa kwazo zonke iintlobo kunye neemilo ezinokwenzeka. Oku kuququzelela indlela yokusebenza oza kuyisebenzisa. Ukuchaneka, inoluhlu lweebrashi ezingama-200 kwaye yahlulahlulwe ngokweendlela ezili-18 ezohlukileyo phakathi kwazo, nokuba ziingcebiso zazo okanye ngemivumbo yazo xa zizisebenzisa.
Sisicelo okanye isixhobo eso iyafumaneka nakwezinye izixhobo ezifana neetafile zegrafiki okanye iitafile. Enyanisweni, ekuqaleni yayiyilelwe ukuba isetyenziswe kolu hlobo losasazo. Inkalo enceda kakhulu inkqubo kwaye ikhululekile ngakumbi.
NjengePhotoshop, Yakha ikwasebenza ngezaleko, ingcombolo enokuba nomdla kuwe kwaye ayitshintshi nantoni na yePhotoshop esiyaziyo nesikhe sayisebenzisa ngexesha elithile. Kuhlala kukhululekile ukwazi ukuba inkqubo yabelana ngokufana kwakho kwezinye iinkalo zobugcisa.
Enye yeenkcukacha ezibalaseleyo kwiimpawu zayo luhlobo lombala abanalo. Inoluhlu olubanzi, njengoko sinokubona iibhrashi okanye ii-texture, siphinde sifumane imibala yazo zonke iintlobo. Umba oncomekayo kakhulu obonakala ngaphandle kwamathandabuzo ukuba ungumzobi okanye umzobi kwaye udinga uluhlu olubanzi lweenkangeleko zemibala.
Okokugqibela kunye nokuncinci kubaluleke kakhulu, kwakhona sifumene iifonti ezinomdla, iinkcukacha ezithetha ukuba akufuneki sizikhangele kwaye sizikhuphele kuyo nayiphi na iwebhusayithi.
IsiFundo: Fiphaza kwi-Procreate
Kukho ukuya kwiindlela ezine ezahlukeneyo zokufiphalisa le nkqubo, nganye ibonakaliswe ngokuba isebenzisa isixhobo esahluke ngokupheleleyo kweso sangaphambili. Nokuba imeko ithini na, ngamanyathelo alula kakhulu ukulandela kwaye ayizukuba ngumsebenzi omninzi kunye nexesha.
Indlela yoku-1: ukufiphala ngombala
Into yokuqala esiya kuyenza kukuqalisa inkqubo, xa sele siyiqalile senza itafile yomsebenzi (imilinganiselo ayinamsebenzi), into ebalulekileyo kukuba yitafile ebanzi yomsebenzi esinokusebenza ngayo ngokukhululeka. Nje ukuba sidale itafile, sithatha ibrashi kunye nokhetho oluphindwe kabini lombala, sipeyinta kwitafile yomsebenzi emhlophe ,kwaye siyenza ngocoselelo nangobuchule, ngaphandle kokunyanzelisa ibrashi.
Emva kokuba sinomxube wombala, siqhubela phambili ekunciphiseni i-opacity, eyona nto ibaluleke kakhulu iya kuba kukufumana ixabiso le-opacity elikuvumela ukuba ufumane umehluko phakathi kweenki ezinemibala emibini. Eyona nto ingcono iya kuba kukuthoba i-opacity kuqala ukuya kwisiqingatha, ipesenti ye-50% iya kuba yeyona ifanelekileyo.
Nje ukuba sithobe i-opacity siya kuba noluzizi lulungile. Unokuzama nezinye iintlobo zeebrashi okanye imibala.
Indlela yesi-2: Ukusebenzisa ubuchule bomculi
Ukuze obu buchule ukwenza sebenzisa ibrashi ephawulwe kakhulu okanye ebiza kakhulu. Injongo ephambili yesi siphumo kukukwazi ukufumana imimandla emibini kwaye ngale ndlela, ukukwazi ukufiphalisa kuphela indawo ephakathi.
Ukwenza oku, siya kwi icon ekwibar yesixhobo kwaye enemilo yomnwe, sinokuyifumana kwezinye iinguqulelo ezahlukeneyo, phezulu kwekhusi, xa siyifumene, siyayivula kwaye iibrashi ezahlukeneyo ziya kuvela.
Ukufiphalisa, kufuneka sikhethe ezona zithambileyo. Obu buchule bubizwa ngokuba bubuchule bomyili kuba ngoku kuxa siqhubeka nokuzoba, Sicinezela ngokukhawuleza kwaye ngokuphindaphindiweyo kwaye ngendlela yezangqa.
Sakuba sinemilo esiyidalileyo, sele sinomfifi ebesifuna ukufikelela kuwo ngokukhawuleza nangokulula.
Indlela yesi-3: Fiphaza ngesicimi
Umthombo: Factory Creative
Kobu buchule, siza kusebenzisa imibala emibini eyahlulwe phakathi kwabo, kule nto, kufuneka senze iileya ezimbini ezahlukeneyo.
Nje ukuba sibe nemibala ekhethiweyo kunye neengqimba, kufuneka nje sebenzisa isixhobo sokucima kunye nebrashi ye-airbrush, kodwa ngeli xesha, siyibeka kude kwinto esiza kuyifiphalisa.
Ngobu buchule sikwanalo nofikelelo lokukwazi ukufiphalisa izithunzi. Iinkcukacha ngokungathandabuzekiyo zothusa abasebenzisi abasebenzisa iProcreate kuyilo lwabo.
Indlela yesi-4: Mfiphali ngeGaussian Blur
Ngaphambi kokuba siqale inkqubo, kobu buchule kufuneka silungiselele umaleko ngento izimisele, leyo sifuna ukuyifiphalisa.
Nje ukuba sinomaleko kunye nento, kufuneka siye kwiseto kwaye siya kuyinika ukufiphala kweGaussian. Nje ukuba intshukumo isebenze, kufuneka siyenze kuphela yalathisa intshukumo yomnwe wethu kwaye uyifiphaze ngendlela esifuna ngayo.
Ezinye iindlela zokuvelisa
Enye yeenketho zokufiphalisa ukuba ufuna ukuzama ezinye iindlela yi-Illustratorr. Yenye yeenkqubo zethala leencwadi ze-Adobe, i-drawback kuphela kukuba ihlawulwe, kodwa unesilingo sasimahla seentsuku ezi-7, ukuze ube nexesha elininzi lokwazi inkqubo kwaye uqalise ukuyila. I-Illustrator inenzuzo enkulu, kwaye kukuba isebenza kunye ne-vectors, iinkcukacha ezinokuba nomdla kuwe, kuba unokudala amanqaku.
Ikwanayo noluhlu olubanzi lweefonti zazo zonke izimbo, ngaphandle kwamathandabuzo, inkcukacha ethanda kakhulu le nkqubo.
Lolunye lolona khetho lunokwenzeka kwaye lusebenza njengesicelo. Inojongano olulula lokusebenzisa kwaye onokuthi ngalo uphuhlise iiprojekthi zakho ngokukhawuleza nangokulula. Ikwanayo nenxalenye ephilayo kunye nesebenzisanayo, kuba unokucwangcisa kwaye ugcine utshintsho olwenzayo kwezinye iileya.
Ngaphaya koko, enye into ebalulekileyo kukuba Iyahambelana zombini Android, Windows kunye IOS. Ngaphandle kwamathandabuzo, isicelo onokuthi usiphose kunye nenye indlela egqibeleleyo.
I-GIMP sisixhobo sasimahla esifana kakhulu nePhotoshop kunye ne-Illustrator. Uneenkangeleko zombala ezahlukeneyo kuzo zombini iRGB kunye neCMYK. Ukongeza, nayo ineentlobo ngeentlobo zeebrashi. Ikwanayo nebhokisi yesixhobo enkulu apho unokufumana izinto ezahlukeneyo onokusebenza ngazo.
Ikwanethuba lokwenza iigradients, kule nto, Uneendlela ezahlukeneyo kunye nobuchule bokwenza i-gradient. Okokugqibela, kukwagxininiswa ukuba sisixhobo onokuhamba ngaso kwaye ufumane izifundo ezilula zokusetyenziswa kwayo, nto leyo eyenza kube lula ukuyiqonda.
IAdobe Photoshop, kunye nesinye isixhobo esithanda uyilo kunye nokuhlelwa kwemifanekiso. Ikwasesinye sezixhobo ze-Adobe, kwaye ikwanezixhobo ezahlukeneyo eziququzelela ukuphathwa kunye nokubamba izinto ezahlukeneyo zegraphic.
Ukongeza, unokufumana esi sixhobo kwiifomathi ezahlukeneyo ezinje ngeetafile okanye iselula. Unokwenza kwakhona i-gradients, yenza iziphumo ezimangalisayo kunye nokulawula iiparamitha ezinjengokukhanya, ukuchasana, ukukhanya kunye neminye imibala.
Ngaphandle kwamathandabuzo, yenye indlela onokuthi, nangona ungakhululekanga, usenokukhetha ukuyizama kangangexesha elithile leentsuku.
I-Procreate yinkqubo elula okanye isixhobo sokusebenza nayo. Akuyomfuneko ukuba ube nguwe wonke okanye ube yingcaphephe kuyilo, kuba ukwanazo nezifundo ezingapheliyo onokuthi ufunde ngazo.
Awukwazi ukufiphalisa kuphela, kodwa wenze imifanekiso enomdla kunye noyilo, ngenxa yoluhlu olubanzi lweebrashi kunye nemibala ekhoyo. Siyathemba ukuba esi sifundo sibe luncedo olukhulu kuwe kwaye ungayila yonke into obeka ingqondo yakho kuyo ukusukela ngoku ukuya phambili.
Iyakuba yintoni into elandelayo oyiyileyo ngeProcreate?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ufiphalisa njani kwi-Procreate